Manatona amin’izao maha ianao anao izao!
"Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin’ny fisainan’ny ratsy fanahy, … ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira; fa ny lalàn’I Jehovah no sitrany … Dia tahaka ny hazo ambolena eo amororn’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoanany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa." Salamo 1:1-3
Ny taona vao nivalona teo dia nilaozan-javatra maro nampitebiteby; hanao ahoana kosa ity taona 2015 ity?
Ny andinin-tsoratra Masina etsy ambony dia mampahafahtatra antsika fa afaka mahita tena fahasambarana isika, na dia eo amina tontolo tsy misy mandeha arak any tokony ho izy aza. Taomina ny tsirairay mba hametraka ny fitokiany amin’ilay Andriamanitra lehibe naneho ny teny tao amin’I Jesosy Kristy. Tokony hamaly izany fotsiny isika! Handray anao Andriamanitra, tsy hanome tsiny. Ny fatrany di any hiainanao ny fiadanany sy ny fahasambarany ary ny hiaraka aminao isanandro.
Ry tanora aza mitaredretra! Aza miandry ho efa nandalo fiainana vao hanapa-kevitra. Ry zokiolona, mbola tsy tara loatra koa ianao! Na dia misy aza nenina mitamberina indrindray mafy dia mafy, dia mamela heloka Andriamanitra. Te handray anao amin’izao maha ianao anao izao Izy. Ny zanany no nomeny mba hanolorany anao izany famelan-keloka izany. Ianao olon-dehibe ao anaty fahatanjahana, ialao ny fikatsahana harena amam-boninahitra! Ankino amin’ilay tsy mikendry afa-tsy izay hahasoa anao ny fiainanao. Ianao saro-kenatra, sahia manatona Azy! Mora fo sy malemy fanahy Izy. Ry voafonja, misy famelankeloka eo amin’Andriamanitra; manomboka izao, matokia ny fahasoavany lavorary, fa te hanome anao fiainam-baovao Izy! Ry tara lava, hafaingano ny dia ho any amin’ilay miandry anao! Ianao manirery manatona an’i Jesosy! Ho tsapanao ny tena fisian’ny fanatrehany.
Isika rehetra dia samy maratran’ny fiainana avokoa, ratra be na kely; aoka isika hilaza ny fijalantsika amin’I Jesosy, Ilay Andriamanitra mpitsabo, ka hitoky aminy. Ndeha hisotro eo amin’ny loharano tsy mety ritra, di any tenin’Andriamanitra. “Aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimam-poana amin’ny ranon’aina” (Apokalypsy 22:17)
Voa tsara afafy